Waraysi uu ka baahiyey Tv-ga Sacuudiga sacuudiga Gabadh uu dhalay Sadaam Xuseen oo Muran ka taagan yahay Hadafka laga leeyahay | Qaran News
Waraysi uu ka baahiyey Tv-ga Sacuudiga sacuudiga Gabadh uu dhalay Sadaam Xuseen oo Muran ka taagan yahay Hadafka laga leeyahay
Writen by Qaran News | 3:27 am 23rd Feb, 2021
,Raqda Sadaam Xuseen
Muuqaallo dhowr ah oo uu baahiyay teleefishinka Al Carabiya waxaa kasoo muuqatay gabadh uu dhalay Sadaam Xuseen oo la yiraahdo Raqad, waxay arrintani horseeday in su’aalo laiska weydiyo hadafka warbaahintan Sacuudiga laga leeyahay ay ka laheyd inay baahiso wareysiga gabadha uu dhalay madaxweynihii hore ee Ciraaq.
Wareysiga lala yeeshay gabadha Sadaam waxaa si weyn uga hadlay dadka adeegsada baraha bulshada ee ku nool Ciraaq, Urddun iyo Kuwait kuwaas oo faafinayay Hal ku dhigga #Raqda_Saddam.
Xusuustii Sadaam Xuseen
Raqda ayaa kasoo muuqatay teleefishinka iyadoo xiran dhar madow ah oo dhinac uga dhegan yahay calanka Ciraaq iyo astaantii caanka aheyd ee xisbigii ka arrimin jiray dalkaas.
Wareysiga lala yeeshay Jimcihii wuxuu inta badan ku saabsanaa ka hadalka astaamihii xisbiga Bacath iyo suurtagalnimada ah in uu kusoo laabto saaxadda siyaasadeed ee Ciraaq.
Raqda waxay ka hadashay sida ay noloshooda aheyd xilliggii Ciraaq uu ka talinayay aabaheed, gaar ahaan waxay ka shekeysay xiriirkii ka dhexeeyay iyada, aabaheed iyo labo wiil oo la dhashay oo la oran jiray Cuddey iyo Qusey kuwaas oo ku dhintay duullaankii Mareykanka uu ku qaaday Ciraaq.
Waxay sheegtay in aabaheed uu ahaa nin naxariis badan oo aan u hanjabin isla markaana xoog ku maamulin carruurtiisa.
Gabadha waxay sidoo kale faahfaahin ka bixisay siyaasadihii aabaheed Sadaam gaar ahaan duullaankii Kuwait iyo duullaankii uu horkacayay Mareykanka ee aabaheed xukunka looga tuuray.
Warbaahinta Al Carabiya ayaa u muuqatay in gabadha uu dhalay Sadaam ay fursad u siineysay inay dhaleeceyso siyaasadda Iran iyo siyaasiyiinta ku sugan Ciraaq.
Weerarka baraha bulshada
Waxaa jira dad badan oo rumeysan in warbaahinta ay adeegsatay fikrad ah ‘inay adeegsatay hadallo dulmi ah’ si ay usoo bandhigto muuqaal ka turjumayo geesinimadii Sadaam Xuseen taas oo kasoo horjeedo mowqifka beesha caalamka ah in uu ahaa hoggaamiye kaligii talis ah.
Dadka qaar ee ku sugan gudaha Ciraaq ayaa si weyn u hadal hayay hadalka gabadha iyo weriyihii wareysanayay, halka qaarkood ay maadeysi ka dhigteen hadalkeeda.
Ereyda Raqda waxaa kamid ahaa “Aabe ma uusan jecleyn in uu daadiyo dhiigga, aabe ma aheyn qof jecel dagaal balse waxaa lagu khasbay in uu go’aan gaaro, qof kasta oo dambi gala waa la ciqaabi jiray ama go’aanada qaar waa inay noqdaan kuwa qallafsan”
Hadalka gabadha ayaa ka careysiiyay siyaasiyiin reer Ciraaq ah oo codsaday in Ciraaq ay u yeerato diblumaasiyiinteeda ku sugan Sacuudiga iyo Urddun halkaas oo ay ku sugan tahay gabadha Sadaam.
Kadib wareysiga gabadha uu dhalay Sadaam, waddaadka shiicada ee Ciraaq Muqtada Al Sadr ayaa ugu baaqay baarlamaanka Ciraaq iyo dowladda inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah waxa uu ku tilmaamay ‘in la ciribtiro xisbiga la mamnuucay ee Bacath’.
Bayaan lasoo geliyay baraha bulshada, Muqtad Al Sadr wuxuu kaga hadlay xasuuqyadii dhacay xilliggii Sadaam iyo xabal wadareedyada.
Dhanka kale, siyaasiyiin iyo dad ka tirsan ururo bulshada rayidka Kuwait ayaa ku baaqay dowladda in dalka ay ka mamnuucdo teleefishinka Al Carabiya, waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wareysiga lala yeeshay Raqda Sadaam oo kusoo beegmay sanadguuradii kasoo wareegtay xilliggii Kuwait ay ka xoroowday duullaankii Ciraaq.
Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay hadalka gabadha oo ay sheegeen “Waa tallaabo muhiim ah uu qaaday Al Carabiya taas oo soo afjareyso gaboodfalkii saameeyay qoyska Sadaam”